Miaramila amerikana 4, Afghana 60 no maty voatafika tao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Miaramila amerikana 4, Afghana 60 no maty voatafika tao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul
Vaovao Mafana Afghanistan • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Fanavaozana: maty marinina amerikana tamin'ny 12 taona izao
Betsaka ireo mpiara-dia amin'i Etazonia no efa namarana ny ezaka famindrana azy ireo alohan'ny fipoahan'ny alakamisy, tamin'ny fitanisana mialoha momba ny fanafihan'ny mpampihorohoro, na nanambara ny alakamisy ho fotoana farany hivoahana.
Amerikanina marinina novonoina tamin'ny fipoahana baomba tao Kabul.
Ampolony ny sivily afghana maty tamin'ny fipoahan'ny seranam-piaramanidina Kabul.
Betsaka ireo mpiara-dia amin'i Etazonia no efa namarana ny sesitany an'i Kabul.
Marinina amerikana efatra ary Afghana 60 farafahakeliny no maty tamin'ny fanafihana natao tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Kabul Hamid Karzai.
Araka ny tatitra farany, ny iraky ny US tany Kabul dia nilaza tamin'ny mpiasan'ny masoivoho any fa marinina amerikana efatra no maty ary telo no naratra tao. fanafihana seranam-piaramanidina. Mandritra izany fotoana izany dia nilaza ny tompon'andraikitra ambony iray momba ny fahasalamana ao Afghan fa ny isan'ny maty an-toerana dia farafahakeliny 60, miaraka amin'ny maro hafa miady amin'ny ainy.
Departemantan'ny fiarovana amerikana dia nanamafy tamin'ny fomba ofisialy fa miaramila amerikana maromaro no isan'ireo novonoina tamin'ny fanafihana ny seranam-piaramanidina Kabul tamin'ny alakamisy tamin'ny fanambarana navoakan'ny sekretera gazety John Kirby.
Tsy nilaza mazava ny isan'ny maty ny masoivoho, ary nanampy fa amerikana marobe no naratra.
Ireo niharam-boina dia vokatry ny "fanafihana sarotra" izay nahafaty olon-tsotra Afgana maromaro ihany koa, hoy ny Pentagon. Ireo fipoahana ireo - nino fa vokatry ny baomba iray namono tena tao amin'ny Abbey Gate sy baomba iray teo akaikin'ny Hotely Baron - namoy ny ainy 13, hoy ny fanamafisan'ny mpitondra tenin'ny Taliban iray.
Tsy misiôna famindra toerana intsony i Danemarka sy Canada; Nijanona tsy nanidina intsony i Polonina sy i Netherlands hatramin'ny fotoana nanafihana, fa i Italia kosa nijanona ny alakamisy alina, ary nanambara ny fe-potoana zoma farany i Frantsa. Ny UK sy Etazonia kosa dia manohy ny sidina satria an'arivony maro no manandrana manangona ireo fiaramanidina misy mihena haingana.